5 Hogaan Tayo Leh Aad u Baahantahay Inaad Barato haddii Aad Doonayso Ganacsade | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Maxay Ka Dhigantahay in Ay Soomaaliya Ku Biirtay Suuqa COMESA?
Tuke Somalism, October 24, 2019
5 Hogaan Tayo Leh Aad u Baahantahay Inaad Barato haddii Aad Doonayso Ganacsade
Cabdijabaar Sh. Axmed — November 21, 2016
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u baahantahay inaad barato haddii aad doonayso inaad noqoto ganacsade. Inaad noqoto ganacsade waa wax iska fudud, balse waxaa adkaani karayso inaad fahanto qaababka ugu wanaagsan aad ku maamuli karto ganacsigaada. Dadka qaar waxay leeyihiin awood ay ku noqoni karaan ‘Ganacsade’ balse ma ogsoona inay leeyihiin awoodaas, sawabtana waxaa keenay aqqoonta ay u leeyihiin nafsadooda ayaa ah aqqoon aan sidaas usii badneen. Waa wax aad u wanaagsan inaad nafsadaada aqqoon fiican u leedahay. Balse waxaan kuu sheegayaa inaad noqoni karto ganacsade.
“Ogaaw marka aad tahay ganacsade hawsha aad bulshada u hayso waa hawl muhiim ah. Ha moodin inaad nafsadaada oo kali wax u qabanayso ee waxaad wax u qabanaysaa dalkaada, dadkaada iyo waliba waxaad soo saaraysaa dadnimadaada”.
Maxay tahay farqiga u dhaxeeyo markaad tahay qof shaqeysto oo dalkiisa dhaqaalo kusoo kordhiyo hadana bulshadiisa usoo gudbiyo badeeco tayo fiican leh hadana ay ku iibsani karaan qiimo ku haboon. Ganacsiga haddii uu yahay mid dhuunto oo kali u duleelo waxbo ma taro ee waxaa wanaagsan inuu yahay mid bulshadiisa daryeelo.
Mawduuceena ma quseeyo arrinkaas balse waxaan jeclaystay inaan waxyar kuu tilmaamo qiimaha ganacsiga uu kuu leeyahay. Waxaan soo qaadani doonaa 5 tayo oo ku saabsan hogaanka aad u baahantahay inaad barato haddii aad doonayso inaad noqoto ganacsade.
Waxwalbo oo aad aragto go’aankiisa haku deg-degin.
Marka aad bilaabayso ganacsi dabcan marka horre waxaad u baahan tahay inaad sameyso magac adiga qaas u ah ganacsigaada. Waxaana jiro qaabab wanaagsan oo aad rabto in wax laguugu sameeyo balse ogaaw qofka hawlaha qaar kuu qabanaayo iyo adiga inaad noqotaan isku aragti waa wax aad u kala fogaani karo. Dadka marwalbo isku aragti ma ahan.
Waxaa jira tusaalooyin badan oo ku saab-san arrintaan balse aan isku dayo inaan soo qaadani karo hal tusaale. Tusaalaha ugu wanaagsan waxaan dhihi karnaa magaca ganacsigaada. Ganacsiga markii aad sameynayso marka horre waxaad isweydiisaa magaca aad u bixinayso. Waa qodob wanaagsan inaad marka horre isweydiiso magaca aad u bixinayso ganacsigaada.
“Haku deg-degin magaca ee si fiican ugu fiirso, maxaa yeelay magaca wuxuu u taagan yahay ganacsigaada, waa adiga muuqaalka wajigaada iyo danaha mustaqbal ee ganacsigaada”.
Qofka adiga kuu design-gareynaayo shicaarka ganacsigaada wey adagtahay inaad u sheegto sidda qalbigaada uu rabo. Waxaa jiro dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo aqqoon u leh qaabka loo design-gareeyo shicaarka ganacsigaada balse wey adagtahay inaad qalbiga si toos ah ugu waranto. Iskuday inuusan kaa xumaanin qaabka aad u baahantahay in wax laguugu sameeyo, laakiin qofka kuu sameynaayo magaca ganacsigaada hadduu yahay qof aqqoon u leh cidda adiga luullanka aad kuwada jirtaan mise aqqoon fiican u leh ganacsiga aad rabto inaad bilowdo ama aad ku jirto wuxuu si toos ah u fahmi karaa qalbigaada sidda u doonaayo in wax laguugu sameeyo.
“Shicaarka waa magaca shirkadaha ay leeyihiin. Shircaarku wuxuu marwalbo u taagan tahay xaqiiqda shirkadaha. Luuqada ingariiska waxaa shicaar lagu yiraahdaa ‘Brand'”.
Haddii aad leedahay shicaar maskaxda dadka si fudud u fahmi karaan waxaa kuu fududaani karayso inaad hanato awooda suuqa uu ka jiro tartanka culus. Laakiin arrintaan marwalbo waxay u baahantahay inaad la timaado xeelado ka duwan kuwa kale ee tartanka aad kuwada jirtaan.
Arrintaan ayaa kaaga baahan inaad la timaado hogaan aan deg-deg ku jirin. Hogaankaada waa inuu noqda hogaan degen oo aadan ku fududaanin. Ganacsadayaal badan markii ay ku cusub yihiin ganacsiga ayaa waxay wax badan ka barteen deg-dega dhibaatada uu u leeyahay ganacsigooda. Haa waa sax, haddii aad aaminsantahay in fikirkaada ganacsi soconaayo uu guulaysani karo hadana wali waxaad u baahan tahay degnaan oo aad qaadani karto go’aamo ximadeysan “wise decisions”.
Noqo shaqsi ay dadka jecelyihiin hogaankiisa.
Dadka ma jeclo in la hogaamiyo ee inta badan waxay jecelyihiin inay iyaga wax hogaamiyaan. Haddii aad doonayso inaad noqoto hogaamiye fiican oo ay dadka jecelyihiin marka horre baro dabeecadaha shaqaalahaaga, iyo waxyaabaha ay jecelyihiin. Dhammaan shaqaalaha si siman u hogaami oo ay ku jirto daacadnimo. Wali lama arkin shirkad dadkeeda ku shaqaalo gareysay waji iyo qabiil oo guulaysatay. Dhibaatada laga dhexli karo ayaa ah qofka ehelka ah masuuliyad sidaas ah iskama saaro halka midka aadan waxbo isku ahayn uu yahay shaqsi shaqadiisa illaalsado. Waana run aan wada ogsoonahay kuligeena, mana u baahno arrintaas in sharaxaad laga sii bixiyo, waa haddii aad doonayso guusha ganacsigaada si siman iyo dabeecad wanaagsan kulla dhaqan shaqaalaha shirkadaada. Markaas ayaad noqoni kartaa qof ay jecelyihiin shaqalaha shirkadiisa iyo guud ahaan sharafta aad ku yeelani karto bulshada.
Waa inaad la timadaa la xisaabtan iyo qaababkii wax loo qabtay. Maxaa yeelay kuligiina waxaa inka wada dhaxeeyo waa shaqo, qofwalbo subaxdii wuxuu gurigiisa ugu soo tagaa inuu shaqeysto si uu caruurtiisa nolol ugu sameeyo. Goobaha shaqada waa inaysan noqonin meel loo soo bashaal tago ee saacadaha shaqada waa in la isweydiiyaa waxyaabaha qabsoomay.
“Inaad hogaamiye fiican noqoto ma ahan wax fudud ee waa wax u baahan isbedel weyn, adigoo qaadanaayo koorsooyin fara badan oo kale duwan. Hogaanka horey ayaa in badan loogu hadlay iyo dhaqanka shaqaalaha shirkada”.
Samir yeelo ” Patience”.
Qof abuuray/sameeyay ganacsi oo hadana guul horey ka gaaray waa wax faro ku tiris ah. Marka aad abuurayso shirkad waxaad u baahan tahay inaad hesho lacag, teknoolijiyad, dad iyo dad adiga kula taliyo. Waa run dhammaan waxyaabahaas wuu u baahan yahay qofka rabo inuu abuuro shirkad. Balse haddii waxaas oo dhan lagu siiyo maanta oo aad horey ka bilowdo ganacsigaada makula tahay inaad horey guul ka gaarayso samir la’aan?
“Dulqaadka iyo samirka waa waxyaabaha guusha lagu gaaro. Xittaa nolosha dadka guusha gaaray waxaa lagu yaqanaa inay ahayeen dad shaqo badan iyo samir inay la yimadeen”.
Waa muhiim in ganacsigaada u sameyso bayaan hadaf, si aad guul u gaarto hadana waxaa lagaaga baahan yahay dulqaad oo ha sugin inaad horey ka guulaysato.
Ogaaw in dadku iskumid ahayn
Ganacsatada inta badan waxay jecelyihiin haddii ay wax sameeyaan in la amaano. Waxbo amaan ha raadinin ee adiga kasbo dadka marka horre. Hogaankaada waa inuu leeyahay heerar kala duwan oo waxwalbana iskumid ahayn. Qofka ganacsadaha ah wuxuu u baahan yahay inuu kala yaqaano dadka uu hogaanka u haayo, waxaa wanaagsan inaad aqqoon fiican u leedahay dadka aad hogaanka u hayso.
“Ganacsigaada guul haka filanin haddii qaabka aad ula dhaqanto macaamiishaada ay xun tahay. Kuna dadaal inaad wanaajiso shaqaalahaaga iyo macaamiishaada”.
Haka xishoonin inaad tiraahdo ’waan qaldanaa’ ama inaad tiraahdo waxaan sameeyay qalad. Waa caadi inaad shaqaalahaaga u sheegto qaladkaada. Waa muhiim inaad tusini karto shaqaalaha halka aad ka jilacsan tahay iyo halka aad ku ad-adagtahay. Maxaa yeelay ma jiro qof wada dhammaystiran qofwalbana meel ayuu ka jilacsan yahay. Sidda dhabta ah waa inaad wax u sharaxi kartaa.
“Aragtida guud markaad fiiriso waxaa halkaasi ka dhalani karto is aaminaad fiican”.
Si hogaankaada u wanaagsanaado wey wanaagsantahay inaad sameysato buugg ka turjumaayo wixii aad qabani lahayd aragtida dhow iyo midda fog. Ganacsigaada waxaad u sameysaa buugg cusub aad ku qorto waxaad qabatay ama qaban doonto siddoo kale, horumarkaad gaartay iyo waxyaabaha ku guul darasaysatayba wuxuu kaa kugu caawinayaa inaad guul gaarto. Ogaaw dadka inta badan wey qariyaan ceebahooda, ha qarinin ceebta kaaga timaaday ganacsigaada. Haddii aad meel fadhiisato oo aad qorto ceebaha ganacsigaada waxay kaa saacidaysaa inaad fahanto wadada kale ee aad u baahanatahay inaad qaado waqtiyada soo socdo.
Tags: 5 Hogaan Tayo Leh Aad u Baahantahay Inaad Barato haddii Aad Doonayso Ganacsade |Tukesomalism.com
Next post Waalidka & Diinta Islaamka |Tukesomalism.com
Previous post Gobollada Soomaaliya Tan Iyo Xorriyaddii 1960 'Jamhuriyadda Soomaaliya' |Tukesomalism.com